FBF Newsletter, Vo. 1, Issue2(Dec, 2008) နှင့် 10D Statement | ဒီရေ
FBF Newsletter, Vo. 1, Issue2(Dec, 2008) နှင့် 10D Statement
နေ့ စွဲ- ဒီဇင်ဘာ ၆ ရက် ၂၀၀၈ အကြောင်းအရာ။ နှစ၆၀ပြည့် အပြည်ပြည်ဆင်ရာ လူအခွငအရေးနေ့သဘောထားထုတြ် ပန်ကြေငြာချက်ို့် မြန်မာပြည်လွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ချုပ်နှင့် နိုငငံတကာရောက် ဒီမိုကရေစီလိုလားသော မြန်မာအဖွဲ့အစည်းများ စုစည်း၍ နအဖ်၏ လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖေါက်မှုများနှင့် တိုင်းပြည်ကို တရားဝင် စစ်ကျွန်ပြုရေး လုပ်ငန်းစဉ်များကို တညီတညွတ်တည်း ပြင်းထန်စွာ ကန့် ကွက်ရှုံ့ချကြောင်း အနှစ် ၆၀ မြောက် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လူ့ အခွင့်အရေးနေ့ တွင် ကြေငြာအပ်ပါသည်။ ဗိုလ်သန်းရွှေ ဦးဆောင်သည့် န၀တ တဖြစ်လဲ နအဖ စစ်အုပ်စုတို့ သည် မိမိတို့အာဏာတည်မြဲရေးနှင့် တိုင်းပြည်ကို တရားဝင်စစ်ကျွန်ပြုရန် အလို့ ငှာ ပရမ်းပတာ ဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်ခြင်း၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်များ၊ ကိုမင်းကိုနိုင်နှင့်တကွ (၈၈)မျိုးဆက်ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်များ၊ လူ့အခွင့်အရေးလှုပ်ရှားသူများကို နစ်ရည်ထောင်ဒဏ်မျာှးချမှတ်ခြင်း၊ ညှင်းပမ်းနှိပ်စက်ခြင်း၊ ပေါ်တာဆွဲခြင်း၊ အတင်းအဓမ္မ လုပ်အားပေးစေခိုငးခြင်း၊်နယ်စပ်ဒေသမှ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုများအပေါ်တွင် မတရားထိုးစစ်ဆင်ခြင်း၊ ရွာများမီးရှို့ ခြင်း၊ လူသတ်ခြင်း၊ မုဒိန်းကျင့်ခြင်း၊ စသော့ ရက်စက်ရမ်းကား ယုတ်မာမူများကို နှစ်ပေါင်း(၂၀)နီးပါး ထပ်ခါတလဲလဲ ကျူးလွန်ခဲ့ကြသည်။ ဗိုလ်သန်းရွှေ၏ စေ့စပ်ရေးဆွေးနွေးရန် တိုင်းရင်းသား ၁၉၉၀ လာမည့် တောင်းဆိုချက်များကို ခေါင်းဆောင်များ၊ မေလရွေးကောက်ပွဲ ၂၀၁၀တွင် (၈၈) ဆင်ခြင်တုံတရားကင်းမဲ့စွာဖြင့် ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်များကို ပစ်ပယ်၍ လျစ်လျုရှု၍၊ ထောင်သွင်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် အကျဉ်းချထားခြင်းလုပ်ရပ်နှင့် သဘောဆန္ဒကိုဆန့်ကျင်ပြီး၊ ရလဒ်ကို ပြည်သူလူထုတရပ်လုံး၏ ကိုယ်တိုင်ထုတ်ဖေါ် ရွေးကောက်အသစ်ထပ်မံပြုလုပ်ရန် ပြောကြားချက်များကိုလည်း ကျွန်ုပ်တို့မြန်မာပြည်လွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ချုပ်နှင့် နိုင်ငံတကာရောက် မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့များ အားလုံးမှ တညီတညွတ်တည်း ကန့် ကွက်လိုက်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့် ယနေ့စုပေါင်းပြုလုပ်သည့် နအဖစစ်အုပ်စုအား ဆန့်ကျင်ရှုံ့ချ ဆန္ဒပြပွဲများမှတဆင့် စစ်အာဏာရှင်စနစ် မြန်မာ့မြေပေါ်မှ လုံးဝ ပျောက်ကွယ်သွားစေမည့် အဆုံးအဖြတ်တိုက်ပွဲ (၀ါ) ဗိုလ်ချုပ်သန်းရွှေနှင့် အပေါင်းအပါ စစ်ဗိုလ်ချုပ်များအတွက် သေမင်းတမန် တိုက်ပွဲ ကိုလည်း မြန်မာနိုင်ငံတဝှမ်းတွင် နအဖ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲ မတိုင်မီ အကောင်အထည်ဖော် တိုက်ပွဲဝင်သွားနိုင်ရန် တစိုက်မတ်မတ် ကြိုးပမ်းသွားမည်ဖြစ်သည်။ သို့ဖြစ်ရာ နအဖ စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကို မြန်မာ့မြေပေါ်မှ အပြီးအပိုင် သုတ်သင်ဖယ်ရှားနိုင်ရန် ပြည်သူတရပ်လုံးက ပူးပေါင်းပါဝင်လာရေးမူ အပေါ်တွင် အခြေခံသည့် လိုအပ်သောလုပ်ငန်းစဉ်များအားလုံးကို စနစ်တကျ ချမှတ်လုပ်ဆောင်သွားကြမည်ဖြစ်သည်။ သမိုင်း၏ တောင်းဆိုချက်ဖြစ်သော မြန်မာ့မျိုးဆက်သစ်များ အခြေခံလူ့အခွင့်အရေး အပြည်အ၀ခံစားခွင့်ရရှိစေရေး၊ တိုင်းရင်းသားပြည်သူများအားလုံး တရားဥပေဒေနှင့် အကာအကွယ် ရရှိစေရေး စသည့် ရည်မှန်းချက်များကို ရှေးရှူ၍ အောင်ပွဲရသည်အထိ တိုက်ပွဲဝင်သွားရန် ကျွန်ုပ်တို့အားလုံး စုပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ကြေငြာအပ်ပါသည်။ ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂ၊ အာဆီယံ၊ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၊ ဗြိတိန်၊ ဂျပန်နင်ငိုံ အပါအဝင် ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအသီးသီးနှင့် နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများမှလည်း၊ မြန်မာပြည်သားများ လွတ်လပ်မှု၊ တရားမျှတမှုနှင့် လူ့အခွင့်အရေးများ ခံစားခွင့်ရရှိပြီး၊ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဒီမိုကရေစီစနစ် ထွန်းကားသည်အထိ နအဖ စစ်အာဏာရှင်တို့အပေါ်တွင် ထိရောက်သည့် အရေးယူမူများအား ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ပေးကြပါရန် အလေးအနက်တောင်းဆိုအပ်ပါသည်။ ရွှေစင်ထွန်း ဒုဥက္ကဌ (၂) မြန်မာပြည်လွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ချုပ် ဆက်သွယ်ရန်။ ကိုရွှေစင်ထွန်း - ဖုန်း (+1) 301 523 9292, Email: shwesinhtun@yahoo.com ကိုရင်အေး- ဖုန်း (+1) 301 905 7591, Email: yindbso@gmail.com